The iPriest: Agadi nwanyi daa ada ugboro abuọ, a guọ ihe o bu n'ukpa ọnụ -Alisonomi
Agadi nwanyi daa ada ugboro abuọ, a guọ ihe o bu n'ukpa ọnụ -Alisonomi
Ndi Igbo si na nke mbu, bu amaghi ama, nke abuọ bu akpachaghi, ma na nke atọ putara na onye o mere amachaghi ihe. Ofifie Chineke bu otu n'ihe njirimara mba ọ bula. Tupurii ndi otu Kristi na ndi uka alakuba abia n'Afrika, ndi Afrika maburu Chukwu. Sọsọ ihe ọhụrụ ndi mgbasa ozi nke ndi otu Kristi na nke ndi otu nkuzi nke Mohamedu wetere anyi bu nkuzi gbasara etu Chineke siri gosie onwe ya na uwa.
Ihe nke a putara bu na ọ bughi ha gosiri anyi na Chukwu di. Mana isiokwu m abughi na enweghi ihe ha wetere anyi. Mbanu! Igu akwukwọ n'udi osi di taa na ihe ọzọ di iche mara mma socha na ọtụtụ ụrụ ọbibia ha bara anyi. Kama, a na-ekwu nke a, ọ ga-adikwanu mma ka a na-ekwukwanu nke ọzọ. Ya mere m chọrọ ilebe anya n'ụzọ ihe ole ma ole ndi wetere anyi efe m Chukwu siri daa ya na mbọ ha gbara.
Na mbu, a chọghi m ibia kọwa ụrụ ọbibia ha bara anyi maka na nke ahu doro ewu na ọkụkọ anya. A choghikwa m ikọwa ihe ha emeghi. Nani ihe di m mkpa bụ etu ihe anyi na-eme ụgbụ a ga-ewetere anyi nsogbu kariri ihe nna nna anyi ha n'okwukwe mere. Mgbe ha biara, ha amachaghi ọtụtụ ihe gbasara omenaala na njiri mara anyi. Ha aghọtachakwaghi etu okwukwe anyi si di. Maka nke a na ihe ndi ọzọ anyi achọghi ikọ maka ya ebe a, ha nedere anyi anya. Ha mekwara ka omenaala anyi burukwa ihe di njọ. Maka ihe ndi a nile, ndi be anyi agbaghi mgbọrọgwu n'okwukwe ha. Anyi biakwara nedee njirimara anyi anya. Mana ọtụtụ n'ime anyi mara taa na ha amachaghi ihe ha megara.
Nke abua, mgbe ndi ozi izizi ahu nabara, umunne anyi bu ndi ha nyere ikikere ilekota mkpụrụ okwukwe nke ha kunyere bidorokwa gbaba anyi mgba okpuru. Ha tinyere ọnụ n'okwu were mee ka njiri mara anyi laa n'iyi. Mana n'afọ ole ma ole gara aga, ndi be anyi ghọtara na ndi wetere anyi ofife na mbu mere ọtụtụ ihe tinyere anyi aja na gari. Mana etu osinadi, anyi kwetekwara na ha akpachaghi anya were mee ya.
Mana mgbe anyi matara na nsogbu anyi abughizi egwu achi utaba n'aka agba bu mgbe ụfọdu umunne anyi ndi uka akụrụ bidoro busoba ihe nile bu omenaala na njirimara anyi agha. Ndi ọcha biara n'izizi mere ka anyi nedee omenaala anyi anya, ndi umunne anyi ha nyere ikikere ime ka ọlr aka ha gaba n'iru mere ka anyi chefuo ihe ndi ahu nile mana ndi agbara ọhụrụ nke ozioma na nke ndi na-agbasa ozi nke ndi ụka alakuba, abughi nani adigburuja kama ha dikwa ezigbo njọ na-ebe oganiihu omenaala na njirimara obodo anyi di.
Ọ bu maka nke a ka ihe ha mere nna nna anyi ha jiri buru maka na ha amachaghi anyi nke ọma. Ihe umunne anyi bu ndi ha nyere ikikere mere anyi buzi na-amaghi ama. Mana nkiti anyi gbara gbasara ihe ndi adigburuja mgbasa okwukwe na-eme anyi tata gosiri n'anyi amachaghi ihe nke ọma.
Posted by The iPriest at 7:51:00 am